ईपीएल सुरुवातको अघिल्लो दिन यस्तो देखियो टियु मैदान ( फोटो फिचर ) – WicketNepal
Birat Jung Rayamajhi, २०७४ पुष २, आईतवार १३:२४
विकेटनेपाल, पुष २
एभरेस्ट प्रिमियर लिग – ईपिएल टि-२० प्रतियोगिता सोमबार देखि टियु क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ। नेपालकै ठुलो घरेलु प्रतियोगिताको लागि ईपीएल आयोजकले आइतबार साँझसम्म अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।
बिभिन्न शहरका कुल ६ वटा फ़्रेन्चाइज टिमहरु सहभागी हुने प्रतियोगिताको बिजेताले रु. २१ लाख पाउनेछ। काठमाडौँ किंग्स ११ , ललितपुर प्याट्रियट्स, बिराटनगर वारियर्स, भैरहवा ग्ल्याडीयटर्स, पोखरा राइनोज र चितवन टाइगर्स प्रतियोगितामा सहभागी टिमहरु हुन्।
उद्घाटन खेलको अघिल्लो दिन टियु मैदानमा पेभेलियन, भीआईपी, मिडिया, बाउन्ड्री लाइन, मैदानको थ्री डी बिज्ञापन म्याट, पिच लगायत पक्षहरुको अन्तिम चरणको कामहरु भइरहेको थियो। मैदानको पिच, सजावट तथा अन्य कामहरु गर्न भारतबाट बिशेष ब्यक्तिहरु आएका छ जसको उपस्थिति पिच, मैदान तथा अन्य कुराहरुमा देख्न सकिन्थ्यो।
मैदानमा राखिएको १६/९ फिटको एलईडी स्क्रिन
खेल हेर्न पुग्ने दर्शकहरुले मैदनमा दर्शकहरुले लाइभ डिजे, क्राउड रेजर, चियर लिडर्सको मजा लिन सक्ने आयोजकले बताएका छन्। मैदानमा खानपिन, टिकार काउन्टर,सफा ट्वाइलेट, व्यवस्थित पार्किंगको ब्यबस्था गर्ने समेत बताईएको छ। खेल हेर्न पुग्ने दर्शकहरुले प्रत्येक दिन सेलिब्रिटीहरुको उपस्थितिमा मनोरंजन प्रदान गर्ने तथा बिभिन्न पुरस्कारहरुको समेत ब्यबस्था गरिनेछ।
पिचको तयारीको लागि भारतबाट क्युरेटर बोलाइएको छ
मैदानमा उपस्थित दर्शकहरुले यो पटक १६/९ फिटको एलईडी स्क्रिन मार्फत खेल हेर्न पाउनेछ जुन मैदानको उत्तरपुर्बी क्षेत्रमा राखिएको छ। ईपीएलको खेल हेर्न दर्शकहरुले आईएमईको जुनसुकै काउन्टरबाट तथा मैदानमै टिकट पाउनेछन्। विद्यार्थीको लागि रु. ५० तथा अन्यको लागि रु. १०० टिकट मूल्य राखिएको छ।
पेभेलियन र डगआउट निर्माण गरिंदै
भीआईपीको लागि ठाउँ
गत बर्षको एभरेस्ट प्रिमियर लिग जस्तो मैदानको हरियाली यो पटक देखिएको छैन। मैदान सजावट तथा बिज्ञापन होर्डिङ बोर्ड तथा अन्तिम चरणको कामहरु सकिएपछि मैदान केहि राम्रो भने देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ।
मैदानमा विज्ञापन पन्ट गरिंदै
पुष ३ गते सुरु हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सोमपाल कामि मार्की खेलाडी रहेको काठमाडौँ किंग्स एक्स-आई र ज्ञानेन्द्र मल्ल मार्की खेलाडी रहेको ललितपुर प्याट्रिएट्स बीच ११ बजे सुरु हुनेछ।
बाउन्ड्री रोप र होर्डिंग बोर्ड
टियु मैदान यो पटक हरियो देखिनेछैन
दर्शक छिर्ने गेट
पेभेलियन छिर्ने गेट